Zimbabwe Postpones School Reopening due to Covid-19, Cyclone - allAfrica.com
Zimbabwe has postponed the reopening of schools due to a surge in Covid-19 infections and tropical storm Chalane sweeping through the region. The government had set January 4 as the date to reopen primary and secondary schools, after many students missed class for much of 2020, as the country tried to curb the spread of Covid-19. Zimbabwe has recorded more than 13,000 cases of Covid-19 and 359 deaths.
New Zimbabwe, 30 December 2020
GOVERNMENT has indefinitely deferred re-opening of schools that had been scheduled for January 4 2021 on the backdrop of a spike in positive Covid-19 cases that has seen the… Read more »
The Herald, 29 December 2020
The Government has stepped up efforts to de-congest all ports of entry and mounted roadblocks to screen for Covid-19 on all roads leading to borders. Read more »
Zimbabwe: Zimbabwe - Millions Now Denied Right to Education
New Zimbabwe, 7 December 2020
In January 2020, teachers in Zimbabwe did not go back to work when schools opened. They said they were incapacitated, they did not have transport money to go to and from work and… Read more »
Zimbabwe is recording a surge in Covid-19 cases after reopening schools and its borders with experts warning that the southern African country is facing a deadly second wave of the… Read more »
Goromonzi and Waddilove high schools have been forced to close after a combined total of 52 students tested positive for Covid-19 since the opening of schools, according to a… Read more »